Nchịkwa Nduzi Software na-akwado Business
N'ime afọ ole na ole gara aga, ahịa agbanweela nke ukwuu na ọbịbịa nke afọ dijitalụ. Kpọmkwem, otú ndị mmadụ na-eziga na-anata amụma amụma e enwekwukwa na mmepe nke usoro njikwa usoro ịre ahịa ịntanetị, dị ka onye ahịa anyị TinderBox. Kedu ihe kpatara ngwọta ndị a ji dị mma karịa naanị ide ederede ahịa na Microsoft Word? Ọfọn, anyị mere ihe ọmụma zuru ezu banyere ya.
Arụpụta na-abawanye ụba site na iji otu n'ime ngwọta ndị a, yana ego ha nwetara. Igwe ojii nke dabeere na igwe ojii emewo ka ọrụ ọrụ nke usoro ahịa ahụ ka mma, na n'ihi na, usoro ahịa a ka mma, kwa. Ma ị bụ obere azụmaahịa, naanị onye nwe ụlọ, ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ, ngwa ndị a ga-azọpụta gị oge na ego. Ma ọ dabere na otu i si eji ha.
Alingrịọ ọtụtụ uche bụ ụzọ dị mma iji mee atụmanya. Na nkwupụta gị, ị kwesịrị iji vidiyo, ọdịyo (ma ọ bụrụ na ọdabara), na onyogho iji dọọrọ uche nke atụmanya ahụ. Atụmatụ ndị a ma ama bụ atụmatụ dị mma, mana ijide n'aka na ọ karịrị akarị. Nkwupụta ahụ kwesịrị ịbụ maka otu olile anya ga-esi hụ ka egbo mkpa ha niile.
Enwere m ọchịchọ ịmata - olee otu ị si eziga ma mepụta atụmatụ gị ugbu a? Email? Okwu akwụkwọ? Gịnị bụ gị nnukwu ihe ịma aka na ahịa amụma?
Tags: gettinderboxinfographicamaghịnjikwa atụmatụamaghị management softwareigbe igbe